Madaxweyne Siilaanyo Oo Ka Hadlay Xaaladda Dalka Ee Abaaraha, Muddada La Hakiyay Diiwaangelinta Iyo Mawduucyo Kale | Araweelo News Network
Madaxweyne Siilaanyo Oo Ka Hadlay Xaaladda Dalka Ee Abaaraha, Muddada La Hakiyay Diiwaangelinta Iyo Mawduucyo Kale
Hargeysa(ANN)Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo, ayaa shacbiga u jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa, taas oo uu kusoo beegay, kagana hadlay Abaarta ba’an ee reebtay riiqda badan iyo Arrimaha la xidhiidha doorashooyinka horaanta 2017.
Madaxweyne Siilaanyo oo xarunta madaxtooyada ka soo saaray khudbad qoraal ah 31 March 2016, waxa uu sheegay inuu u gudbiyey Golaha Wakiillada Somaliland soo jeedin ah in wax-ka-beddel lagu sameeyo qodobada xeerka Diiwaangelinta Codbixiyayaasha ee Xeer Lr. 37/2007 ee waajibinaya in liiska codbixiyeyaasha la diyaariyo lix bilood ka hor maalinta doorashooyinka, isla markaana lagu beddelo in liiskaas lagu diyaariyo muddo lix bilood gudahood ah.
“Si loo suurtagaliyo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta xilligii loogu talogalay, isla markaana loo helo wakhti fiican oo ku filan in Guddida Doorashooyinka Qaranku hawlaha ku dhammaystiraan qabyada noqon kara, waxaan u gudbiyey Golaha Wakiillada soo-jeedin in wax-ka-beddel lagu sammeeyo Qodobka 7aad, Faqraddiisa 2aad oo u dhigan sidan “Komishankuna waxa xil ka saaran yahay kaydinta, xafidaada iyo soo saaridda liiska kama dambeysta ah ee Diiwaangalinta Codbixiyayaasha 6 bilood ka hor maalinta doorasho kasta”.
iyo Qodobka 26aad, faqraddiisa 2aad oo u dhigan “Liiska diiwaanka codbixiyaha waxa soo saaraya Komishanka Doorashooyinka Qaranka lix bilood (6) ka hor xilliga doorshada.” Qodobadaas oo ka mid ah Xeerka Wax-ka-beddelka iyo Kaabista Diiwaangelinta Codbixiyayaasha ee Xeer Lr. 37/2007 ee dib loo habeeyey sannadkii 2014-kii.
Nuxurka wax-ka-beddelka cusub wuxuu noqonayaa in qodobbadan oo dhigaya in Lix (6) bilood ka hor lagu dhammeeyo diiwaangalinta codbixiyeyaasha, laguna soo saaro liiska cod-bixiyaasha, lagu beddelo Lix (6) bilood gudohood in lagu dhammaystiro, laguna soo saaro Liiska Cod-bixiyeyaasha,” ayuu yidhi madaxweyne Siilaanyo.
Waxaannu intaas ku daray; “Tani waxay markhaati ma-doon u tahay in aan ka soo horjeedo sabab kasta oo keeni karta dib u dhac ku yimaad doorashooyinka muddaysan.
Cidda tuhunsan inaan tab iyo xeelad ka dayayo, towsta iyo tabaalaha qaylo-dhaanta abaaraha, waxaan u caddaynayaa in aan u xusul duubanahay in doorashadu ku qabsoonto xilligeedii, waxaanan leeyahay bishu hortiina ayey iman doontaa ee yaan la idinku adimin idinkoo hadal tiro iyo tow-tow gidaarada ka shubaya.
Ma aaminsani in magac iyo maamuus iigu kordhayo in muddo marba la ii kordhiyo.
Waxaan ahay Madaxweyne wax qabtay oo aan weji-gabax hayn. Waxaan ahay Madaxweyne ay dadkiisu doorteen oo daacad u ah ka shaqaynta danahooda guud.
Waxaan ahay siyaasi afartan sanno in ka badan ummaddiisa u soo adeegayey utun la’aan. Sidaa darteed, haddii uu kursi jacayl i hayo amma aan doonayo inaan halkan iska sii fadhiyo miciin kama dhigteen marba muddo-kordhin ee murrashax ayaan noqon lahaa oo waan tartami lahaa.”
Madaxweynaha, ayaa uga mahadceliyey Guddida Doorashooyinka Qaranka isku-duubnida, dulqaadka iyo dedaalkii ay muujiyeen muddada hawlgalka diiwaangelintu ka socotay dalka, isagoo sidoo kale ammaan u jeediyey mas’uuliyiinta ama madaxda gobollada diiwaangelintu ka hirgashay iyo ciidammada ammaanka Jamhuuriyadda Somaliland uu xusay inay si geesinimo leh ugu garabgaleen Guddida Doorashooyinka Qaranka gudashada xilka diwaangelinta.
“Annigoo ku hadlaya magacayga, ka Xukuumadda iyo ka Shacbiga Somaliland, waxaan uga mahadcelinayaa dalalka Midowga Yurub doorkii lama ilaawaanka ahaa ee ay ka qaateen taabagelinta Diiwaangelinta Codbixiyayaasha. Waxaan ka codsanayaa inay halkaa ka sii wadaan taladooda iyo taageeradooda saaxiibtinimo.
Waxaan Bulshada Caalamka iyo dhammaan Hay’addaha Samafalka Caalamiga ah ugu baaqayaa inay kaalmo iyo gurmad bani’aadannimo la soo gaadhaan dadka ku tabaalaysan deegaannada ay abaaruhu aafeeyeen, dadkaas oo tiradoodu ku dhaw dahay laba boqol oo kun oo qoys,” ayuu yidhi madaxweyne Siilaanyo oo baaq u diray beesha caalamka.
Waxa kaloo madaxweynuhu ka hadlay sababaha ku kelifay inuu go’aansado in la hakiyo diwaangelinta codbixiyeyaasha, waxaannu yidhi; “Markii aan xog-ogaal u noqday in xaaladda ba’an ee abaaraha dalka ku habsaday ay ka sii darayaan marba marka ka sii dambaysa, isla markaana ay duruuftu gaadhay heer ay bilaabantay in ay darxumo iyo diif u dhintaan duur-joogta, duunyada la dhaqanayey iyo dadkii noolaa, intuba.
Markii aan tixgeliyey dareenka hal-doorka Bulshada Somaliland ee tibaaxayey in aanay habboonayn in la sii wado Diiwaangelinta Codbixiyayaasha marxaladdan abaaruhu sii xumaadeen.
Markii aan qiimeeyey nuxurkii ka soo baxay kulankii talo-wadaaga ahaa ee aan ugu yeedhay Madaxda Xisbiyada Qaranka iyo Shir-guddoonka labada Gole (guurtida iyo wakiillada).
Markii aan arkay xilka iyo mas’uuliyadda gaarka ah ee hoggaamiye ahaan iiga saaran aafadan ummadda ku habsatay, in loo baahan yahay, si looga samato bixiyo in cududda, cuudka iyo caqliga qaranka lagu jeediyo gurmadka abaaraha.
Markii aan isku-qanciyey in hakinta gaaban ee abaaraha dartood lagu sammeynayo Diiwaangalinta Cod-bixiyayaasha aanay dib-u-dhigis ku samaynayn xilligii doorashada, iyada oo ay iga go’an tahay in aan dalkan ka qabto doorasho xor iyo xalaal ah xilligii loo qoondeeyey 27-ka bisha March, 2017-ka (haddii Ilaahay yidhaah.”
Markii aan garwaaqsaday in ay tahay waajib marxaladdan ay qaranka soo foodsaaraysay masiibada adag in loo gacan baxo gurmadka iyo kaalmada loo geysanayo dadka abaaruhu aafeeyeen, isla markaana ay adag tahay xilligan in la isku wado hirgelinta labadan mashruuc ee waaweyn (laabi Labo u La’).
•	In la hakiyo muddo kooban oo bil ah Diiwaangelinta Codbixiyayaasha (Bisha April 2016).
•	In Dhammaan shacbi iyo dawladba loo galo gurmad qaran deegaannada ay abaaruhu aafeeyeen, maskaxda, muruqa iyo maalkeena koobanna meel loo wada jeediyo marxaladdan.
Si aynu uga samato-baxno masiibada abaarta, Allaheena weynina inoo gargaaro, waxa inala gudboon ummad ahaan in aynu isu-naxariisanno, iskaalmayno, iscafino, isu-calool-samaano, maskaxdeena, muruqeena iyo maalkeena midayno, Allahena u noqono, isla markaana kaalmaysanno salaadda, soonka iyo baryada Eebe, maadaama gargaarkiisa iyo gacantiisa oo keliya aynu ku baahi beeli karno.”
Madaxweynaha ayaa u mahadceliyey Guddida heer qaran ee loo xilsaaray taakulaynta iyo taageerada dadka abaaruhu saamaynta xun ku yeesheen, waxaannu yidhi; “Anniga oo fursadan ka faa’iidaysanaya waxaan jecelahay in aan halkan uga mahadceliyo Guddidii Qaran ee aan u xilsaaray gurmadka abaaraha, kuwaas oo si xil-kasnimo leh ugu hawlan kaalmada loo fidinayo dadka tabaalaysan.
Sidoo kale, waxaan u mahadnaqayaa ganacsatada, ururrada waddaniga ah, hay’adaha samafalka caalamiga ah iyo dhammaan muwaadiniinta sida hagar la’aanta ah uga qaybqaatay qaadhaan uruurinta loo sameeyey abaaraha.
Waxaan dhammaantood bulshada kala duwan leeyahay ‘Ilaahay samafalkiina ha idiinku biiriyo miisaanka xasannaadka.’
Mar labaad, waxaan ugu baaqayaa Shacbi-weynaha Jamhuuriyadda Somaliland in ay si isku-tashi iyo naf-hurisnimo leh uga qaybqaataan kaalmada iyo gurmadka loo geysanayo walaalahooda abaaruhu waxyeeleeyeen.
Waxaan leeyahay dadkayga “Marka aynu isu naxariisanno, ayuu Ilaahayna (SWT) inoo naxariisanayaa.” Nabigeennii Suubanaa, Nabad iyo Naxariis Eebe Korkiisa ha Ahaatee, waxa uu yidhi; “Kuwa Naxariista, waxa u naxariista Allaha naxariista badan.”
Sidaas darteed, waxaan ku guubaabinayaa dadweynaha gudo iyo dibad, qurba-joog iyo qolqol-joog, intuba in aan loo kala hadhin gurmadka abaaraha baahsan.
Waxaan idin leeyahay dadkaygiiyow, waxaynu nahay hal dal, hal dad iyo hal dareen,” ayuu yidhi madaxweynaha Somaliland.